Red Queen, windo maka ahụmahụ nke Antonia Scott | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Uhie Nwanyị bụ ihe ịtụnanya nke Spanish Juan Gómez-Jurado dere. E bipụtara akwụkwọ a na November 2018 ma bụrụ nke mbụ nkeji atọ nke trilogy nke na-akọ akụkọ ihe mere eme nke Antonia Scott. Ọ bụ nwanyị na-adọrọ mmasị nke nwere ọgụgụ isi dị ịtụnanya, onye na-enweghị onye uwe ojii edozila ọtụtụ mpụ. Ma, ọnọdụ ụfọdụ emewo ka ọ biri nanị ya.
Ihe nzuzo Antonia gbanwere n'ihi enyemaka nke onye uwe ojii Jon Gutiérrez, bụ onye na-achịkwa iji mee ka ọ pụọ n'ụlọ mkpọrọ iji mee nyocha ọnụ. Nke a bụ otu akụkọ dị ịtụnanya na nke dị omimi si apụta na obodo Madrid dum. N'ihi ya, Uhie Nwanyị o meela ka ndi ode akwukwo ya na mba nile dochie akwụkwọ ya karia 250.000.
1 Banyere onye edemede, Juan Gómez-Jurado
1.1 Ọrụ na akwụkwọ na otuto
1.2 Gaa na stardom
1.3 Akwụkwọ ụmụaka na ụmụaka
1.3.1 Ọrụ ụmụaka
1.4 Ọrụ mgbasa ozi
2 Nyocha Red Queen
2.1 Uhie Nwanyị
2.4 Nchoputa mbu
2.5 Tọrọ mmadụ
2.6 Nchọgharị ahụ malitere
Banyere onye edemede, Juan Gómez-Jurado
Na Fraịdee, Disemba 16, 1977, ka amụrụ na Madrid Juan Gomez-Jurado. O nwetara nzere bachelọ na Science Information na Mahadum CEU San Pablo. Ozo, ewulitela ọrụ dịka onye nta akụkọ na mgbasa ozi Spanish dịka Ọwa +, Radio Spain, ABC, COPE Eriri ma soro na magazin Ihe iguru, Ntughari akwukwo nke New York Times na Jot Down.
Ọrụ na akwụkwọ na otuto
Gómez-Jurado bụ onye edemede pụtara ìhè na ụdị egwu egwu, ọrụ ndị mbụ ya bụ: Ndi nledo nke chi (2006), Nkwekọrịta na chi (2007) na Ihe Onye sabo nke Onye sabo (2008). Ọrụ ikpeazụ a - sitere n'ike mmụọ nsọ site na akụkọ eziokwu ma tinye ya na Nazi Germany - kwesịrị nke Obodo Torrevieja Novel Award.
Mgbe afọ 4 gachara, onye edemede ahụ gara n'ihu n'ọrụ ya na akwụkwọ akụkọ: Akụkọ banyere onye ohi (2012), Onye ọrịa (2014), Ihe nzuzo nzuzo nke Mr. White (2015) na Akara (2015). Akwụkwọ ikpeazụ a, dịka Ihe Onye sabo nke Onye sabo, so n’ime ndị kacha ere ahịa na dijitalụ usoro n'ime Ihe ikpo okwu Amazon n’ime afọ 2011 na 2016.
Gaa na stardom
Na 2018, Gómez-Jurado gosipụtara ihe nkiri ahụ Uhie Nwanyị ịmalite trilogy nke Antonia Scott, ihe odide mbụ nke jidere ọtụtụ narị ndị na-agụ akwụkwọ. Anapụta Nwa nkita (2019) na Onye ocha (2020) gara n'ihu na-aga nke ọma na nke a. Usoro a mere ka onye edemede nweta akwụkwọ kachasị mma karịa 1.200.000 mbipụta nke ndị na-agụ ya nwetara, na-edepụta onwe ya dị ka otu n'ime nnukwu ndị na-egosipụta ụdị.
Akwụkwọ ụmụaka na ụmụaka
Site na 2016, Juan Gómez-Jurado gbanye na akwụkwọ ụmụaka, kpọmkwem na ụdị nke njem na ihe omimi. Ọ malitere usoro ya na usoro abụọ: alex nwamba y Ndị na-emegharị ahụ. Na nke ikpeazu, onye ode akwukwo kesara ihe omuma ya na Bárbara Montes.
Ọ bụ Fran Ferriz mere ihe osise nke ihe odide ụmụaka a. Na 2021, Gómez-Jurado malitere usoro ohuru na Montes nke na-akọ akụkọ banyere nwa agbọghọ Amanda Black. A kpọrọ aha nke mbụ ahụ Nketa Dị Ize Ndụ.
Alex Colt Usoro:
Cadet oghere (2016).
Agha Ganymede (2017).
Ihe nzuzo nke Zark (2018).
Ihe gbara ọchịchịrị (2019).
Emperor nke Antares (2020).
Ihe omimi nke Punta Escondida (2017).
Mines nke Mbibi (2018).
Palacelọ okpuru mmiri (2019).
Nketa Dị Ize Ndụ (2021).
Na ọrụ ya na mgbasa ozi ọdịyo, gosipụtara òkè ha maka afọ 4 (2014-2018) na redio redio Spanish Onda Cero. N'ebe ahụ, ya na Raquel Martos, o wepụtara ngalaba "Ndị mmadụ n'otu n'otu" nke magazin ahụ Julia jụụ. Na 2017, ya na Arturo González, ọ duziri mmemme ahụ: cinemascopazo, nke bufere site na YouTube.
Ọ tinyela aka na ụwa nke pọdkastị, yana ọrụ ọdịbendị abụọ: Onye Pụrụ Ime Ihe Niile y Ndị a bụ dragọn. N'ime ha abụọ ọ na - ekenye igwe okwu site na mbido rue ụbọchị na Rodrigo Cortés, Arturo González-Campos na Javier Cansado. Na 2021, Ọ malitere dị ka onye na-egosi telivishọn maka Mgbanwe capacitor, mmemme akụkọ ihe mere eme na ọwa 2 de TVE.
Nyocha nke Uhie Nwanyị
Uhie Nwanyị bụ akwụkwọ mpụ mere na Madrid, ebe a na-enwe mmetụta uche dị ukwuu mgbe ịtọrọ mmadụ na-edozi. Na nkata ahụ, Antonia na Jon sonyeere na nyocha ahụ nke ikpe ụfọdụ metụtara ezinụlọ abụọ nke obodo dị elu na Spanish. A na-egosipụta usoro akụkọ ọ bụla n'ụzọ ọhụrụ, yana mkparịta ụka dị mfe na obere isi na-ejide onye na-agụ ya ozugbo.
Red Queen (Nkata)
Red Queen bụ ọrụ Europe nke raara nye nyocha mpụ, e kere iji dozie oke ikpe na oke nghọta na mpụga iwu. Nzuzo a nwere nnukwu ugwu, na jikwaa ọrụ ha jikọtara ọnụ na ndị uwe ojii gafee Europe, Antonia Scott bụ akụkụ nke nzukọ ahụ.
Antonia, nwanyi nwere onyinye, Afọ 2 gara aga ọ pụọ n'ọrụ ya na ezigbo ụwa. Ọnọdụ a bụ n'ihi oké ịda mbà n'obi akpali mmetụta nke obi amamikpe na-emetụta ya, mgbe ihe mberede nke Marcos -her di ya- onye nọ n'omume nọ n'ụlọ ọgwụ.
Onye nyocha Gutiérrez bụ onye uwe ojii dị uchu n’ihe karịrị afọ 40 Nwoke na nwanyi-. Ọ sitere na Basque Country, nwere ahụ siri ike n'ihi na ọ na-atọ ya ụtọ ibuli ibu; na mgbakwunye, o nwere ezigbo ọchị. N’agbanyeghi na Jon bu onye uwe ojii n’eziokwu, Akwụsịla ya ugbu a n'ọkwá ya maka kwuru na aka ya iwu na-akwadoghị.
Na mbido, Antonia na Jon ga-achọpụta ihe kpatara igbu ọchụ ahụ bụ valvaro Trueba, nwa onye isi nke otu ụlọ akụ ama ama na Spen. Nwa okorobịa ahụ ga-enweta nwa nwoke na-efu efu ruo ọtụtụ ụbọchị ma mesịa nwụọ na ọ bụ naanị obodo ukwu na Madrid Ka Antonia na Jon na-eme nyocha, ịtọrọ ha site n'ịtọrọ nwatakịrị nwanyị ọzọ bara ọgaranya.
Akụkọ a na-egosi nnabata Carla, onye bụ ada Ramón Ortiz, onye ọchụnta ego Galician weere dị ka nwoke kasị baa ọgaranya n'ụwa. Carla na-agbaba na ọrụ ya na ụlọ ọrụ ụlọ, mgbe ọ na-enweghị ezigbo mmekọrịta ya na nna ya na nwanne ya nwanyị. Ọ bụ ezie na nyocha ahụ na-etolite, a na-ekpughere nkọwa gbasara ndụ onwe ya, nke ga-eweta ihe ngosi bara uru n'okwu ahụ.
Nchọgharị ahụ malitere
Jon Gutiérrez bụ onye nyocha, n'agbanyeghị na ọ nwere ọrụ na-adịghị mma, etinyela aka na nrụrụ aka n'oge na-adịbeghị anya. Na usoro a, Onye dị omimi kpọtụrụ Gutiérrez, onye na-atụ aro ya ozi: ịchọta Antonia Scott wepukwa ya si na mkporo ya. Na nzaghachi, o kwere nkwa inyere gị aka ihicha ọrụ gị.
Mgbe ị nabatara onyinye ahụ, onye nyocha ahụ malitere njem Lavapiés, ebe obibi Antonia. N'ebe ahụ, ọ ghaghị ịkwado ya ịrụkọ ọrụ ọnụ, ọrụ nke na-agaghị adị mfe, ebe ọ nọ na-enwe nnukwu mwute. N’agbanyeghi ogba aghara, Jon jisiri ike mee ya obi; na site n'iwebata okwu eziokwu nke Trueba, ọ na-akpọte nsinammuo ndị uwe ojii ya.
Dika ajuju banyere okwu a si aga, mmekọrịta dị n'etiti Antonia na Jon gafere ọtụtụ ọkwa, nke a n'ihi na ha nwere ụdị mmadụ dị iche iche, ma nke ahụ na-emeju ibe ha. N'otu aka ahụ, nyocha ahụ ga-ewere ọnọdụ nke ihe omimi na ihe isi ike, nke profaịlụ nke ndị ahụ metụtara dabara na nke ga-ebulite amaghị, ọ ga-abụ otu onye ahụ na-eme ihe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Uhie Nwanyị
Ofdị ndị na-akọ akụkọ
Marquis nke Santillana. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke